अलिसँग चौथो सहकार्य गर्दै सलमान ?
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ २३, २०७६२२:५९
फिल्म । बलिउडमा यतिबेला फिल्म भारत प्रदर्शनरत छ । यसले पहिलो दिन नै ४२ करोडको कलेक्सन गर्दै सलमान खान अभिनित फिल्मको लिस्टमा नम्बर एक मा आएको छ । फिल्मको कलेक्सन देखेपछी सलमानले सोसल मिडिया मार्फत दर्शकलाई धन्यवाद समेत दिएका छन् । उनले आफ्नो करियरकै ठुलो ओपनिङ गर्न सफल फिल्म भएको बताएका हुन् ।
फिल्मलाई अलि अब्बास जफरले निर्देशन गरेका छन् । अलिले सलमानसँग यस अगाडी नै सुल्तान र टाइगर जिन्दा है मा काम गरिसकेका छन् । यी दुइ फिल्मनै सलमानको रुचाइएको फिल्ममै पर्छन । त्यसैले पनि अलिसँग ‘ह्याट्रिक’ गर्ने सोच सलमानमा छ । पहिलो दिनको कमाइले ‘भारत’ हिट हुने लक्षण देखाईसकेको छ । फिल्मले पाएको समिक्षा र गरेको ब्यापारको आधारमा सलमानले अलिसँग चौथो सहकार्य गर्ने मनसाय बनाएका छन् ।
यतिबेला सलमानले अलिलाई टाइगर सिरिजकै फिल्म लेख्न सुझाएका छन् । टाइगर सिरिजलाई दर्शकलले अत्यधिक रुचाएका छन् । सलमानले दबंग ३ , इन्शाअल्लाह र किक २ मा काम गरेपछि अलिसँग फेरी काम गर्ने सम्भावना देखाएका छन् । यी दुइले सँगै काम गर्ने र त्यो पनि टाइगरको तेस्रो सिरिज ल्याउने खबर आएपछि फ्यान खुसि देखिएका छन् । तर , यसलाई सलमान र अलिले आधिकारिकता दिईसकेका छैनन् । (एजेन्सी)
जय श्री दामको प्रिभ्यु (भिडियो)
स्वस्तिमाको नयाँ फिल्म निश्चलसँग ?
सलमान भन्छन् ‘कट्रिनाले मलाई रिजेक्ट गरिन्’